Ulo oru bu ndi n’ze ikike site na izuta ya | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 6, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya, anọ m na mkparịta ụka na otu ndị isi na-elekọta mmadụ na-edu ndú na Facebook ma ọ juru m anya mgbe otu n'ime ndị òtù ahụ gbachitere ịzụ ụmụazụ. Afọ ole na ole gara aga, edere m akwụkwọ na Ọnụ Ọgụgụ. Na na post, M na-ajụghị ịzụ ndị na-eso ụzọ, amasị, clicks, wdg… n'eziokwu, M chere na ọ bụ ego na-abụkarị ndị bara uru.
Ana m agbanwe obi m. Ọ bụghị na anaghị m ekwenye na ọnụọgụ ndị a dị mkpa. Ọ bụ na m kwenyere na ụlọ ọrụ na-etinye aha ha na ikike ha n'ihe egwu site na iji usoro ndị a. Otutu ulo oru di. Izụta ikike abụrụla nnukwu ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị dị ka ika bụ iwu ikike site n'igosipụta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu… ị nọ n'ihe ize ndụ nke ịhapụ ikike ahụ tinyere nkwenye ọ bụla site n'ime otú ahụ.
Nke a na-echetara m nke search engine njikarịcha ụlọ ọrụ. Google mara ọkwa maka oge ụfọdụ na ya Okwu nke Service na ịzụta ntinye maka njikọ bụ nke mebiri ozugbo. Uru ya; otu o sila dị, ọnụ ahịa karịrị akarị na ọnụ ahịa ọtụtụ mmadụ ritere uru n ’ịzụrụ njikọ… ruo mgbe hama dara. Ugbu a ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a etinyela ọtụtụ iri puku dollar efuola nde.
M na-ebu amụma na nke a ga-erukwa na mgbasa ozi mgbasa ozi. Usoro nke ọrụ niile na saịtị mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị dọọ aka na ntị na iji ozi ụgha iji bulie ọnụọgụ:
Twitter - You nwere ike izute weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa na-azọrọ na ha nwere ike inyere gị aka inweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ngwa ngwa. Mmemme ndị a nwere ike ịrịọ maka ịkwụ ụgwọ maka ndị na-eso ụzọ, ma ọ bụ jụọ gị ka ị soro ndepụta nke ndị ọrụ ndị ọzọ iji sonye. A naghị ekwe ka iji ihe ndị a dị ka Iwu Twitter.
Facebook - Enwere m ike ịzụta mmasị maka Facebook Page m? Mba. Ọ bụrụ na sistemụ Facebook na-achọpụta na Page gị ejikọtara na ụdịrị ọrụ a, anyị ga-etinye oke na peeji gị iji gbochie mmebi iwu nke Nkwupụta nke ikike na ọrụ anyị.
LinkedIn - N’adịghị ka ụfọdụ ndị ọrụ ntanetị ndị ọzọ, ndị òtù anyị kwesịrị ịbụ ndị dị adị, ndị na-enye ezigbo aha ha na ozi ziri ezi banyere onwe ha. Ọ dịghị mma ịnye ozi na-eduhie eduhie banyere onwe gị, iru eru gị ma ọ bụ ahụmịhe ọrụ gị, njikọta ma ọ bụ rụzuru na ọrụ LinkedIn. Onye ọrụ nkwekọrịta.
Google+ - ndị nkwusa nwere ike ọ gaghị eduzi ndị ọrụ pịa bọtịnụ Google+ maka ebumnuche nke ndị ọrụ na-eduhie eduhie. Ndị mbipụta nwere ike ọ gaghị akwalite ihe nrite, ego, ma ọ bụ ego ha nhata ka ha pịa bọtịnụ bọtịnụ Google+. Iwu Button.
Youtube - Agbanyela ndị ọzọ pịa mgbasa ozi gị ma ọ bụ jiri usoro mmejuputa nke aghụghọ iji nweta clic, gụnyere clic na vidiyo gị iji bulie echiche. Nke a gụnyere inye ndị ọrụ ụlọ ọrụ nke atọ ọrụ ịkpọsa ọrụ ndị a iji bulie ele gị anya. Purchasezụ ma ọ bụ egwuregwu nke ndị debanyere aha, echiche ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ọwa atụmatụ bụ imebi anyị Okwu nke Service.
Yabụ… mgbe ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị otu ụlọ ọrụ ahụ jiri nyiwe ndị a, ha kwenyere na nkwekọrịta iwu kwadoro na ụlọ ọrụ ndị a. Mgbe i mebiri usoro ha, ị na-emebi nkwekọrịta ahụ. Ọ bụ ezie na ekwenyeghị m na nke ọ bụla n'ime ndị dike a ga-agbaso mmebi maka imebi usoro ha, ha na-akụda. Imaatu, imaatu, efunahụ echiche ha niile na ikike ha na Youtube mgbe Google choputara na ha na-azuta echiche iji mee ka onu ogugu ha di elu.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ nwere ike iyi uwe ndị a, ọ ga-atọ anyị ụtọ ịhụ ka gọọmentị si ele ya. Ọbụna Onye isi Obama na-elekọta mmadụ ka ejidere red ihe karịrị ọkara nke ndị na-eso ya bụ adịgboroja. N'ezie, enwere obi abụọ na ikike onye isi ala Obama… yabụ ejighi m n'aka ihe kpatara nde 10 ma ọ bụ nde 100 nde ụmụazụ na-emetụta ihe na-abụghị ego. E jidekwara Ngalaba Ọchịchị - na-emefu ego ihe karịrị $ 630,000 na Facebook mmasị. (Ghara ikwu na m ejighi n'aka na ụmụ amaala chọrọ ka ha na-atụ ụtụ isi ego tinye n'ọrụ n'ụzọ dị otu a).
Enwere akụkụ gbara ọchịchịrị karịa na ọnụọgụ ndị a, agbanyeghị, na nke ahụ bụ ahia ahia. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla nwere ndị na-achị achị nke a na-ebo ebubo ka ha chọọ ndị na-azụ ahịa. Gịnị ma ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa nyochaa ụlọ ọrụ na ntanetị, hụ ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị Fans, ndị na-eso ụzọ, mmasị ma ọ bụ retweets, wee mee mkpebi ịzụta dabere na ọnụọgụ ụgha ndị ahụ? Ma ọ bụ ọbụna ka njọ, gịnị ma ọ bụrụ na onye na-achụ ego na-enyocha ụlọ ọrụ ha chọrọ itinye ego na ya ma nye ha echiche ụgha na ha na-ewu ewu karịa ka ha dị n'ezie? Ebumnuche nke ịzụrụ ihe ndị a is iji metụta ndị na-eri ihe… ma ekwenyere m na nke ahụ na-eme.
Ọ bụrụ na ndị FTC nwere ike iji naanị okwu ma ọ bụ abụọ jiri ya wee taa otu ụlọ ọrụ ahụhụ ma ọ bụ mgbasa ozi ụgha, kedu ka ndị ụlọ ọrụ na-enweghị isi ga-esi azụ ndị na-akwado ha, ndị na-eso ụzọ ya, ndị na - akpọghachi azụ, + 1s, mmasị ma ọ bụ echiche. Ndi ụlọ ọrụ ahụ ga-aza ajụjụ maka na ha gbanwere ọnụ ọgụgụ ndị ahụ?
M kwere na ọdịnihu ha ga-abụ. Jide n'aka na ndị ọrụ gị anaghị eji usoro ndị a. M ga-ejide n'aka na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ndị ọzọ ị na-azụ ahịa anaghị eji usoro ndị a.
Tags: ịzụ + 1sịzụta na-esoịzụ ihe na-amasịFacebookgoogle +LinkedInTwitter
Akụkụ nke mmadụ nke ịgba chaa chaa